Muuqaal naxdin leh oo muujinaya haween iyo ilmo yar yar oo ay dhaleen oo la wada tooganayo oo la ogaadey goobta & cidda gaysatey (Daawo) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Muuqaal naxdin leh oo muujinaya haween iyo ilmo yar yar oo ay...
Muuqaal naxdin leh oo muujinaya haween iyo ilmo yar yar oo ay dhaleen oo la wada tooganayo oo la ogaadey goobta & cidda gaysatey (Daawo)
(Hadalsame) 12 Jan 2022 – Waa 2 haween ah iyo carruur ay dhaleen oo weliba midkood la sido kuwaasoo inta niman askar ah oo si qoor qabad ah u wadey inta meel fariisiyeen oo indhaha ka xireen ay ku dhufteen 22 xabbadood.
Markii hore waxaa muuqaalkan la sheegayey inuu yahay Nigeria ama Mali balse waxaa haatan caddaatay inay tahay woqooyiga fog ee Cameroon oo ay dowladda dalkaasi kula dagaallamaysey kooxda Boko Haram tan iyo 2014-kii, iyadoo haweenkan lagu eedeeyey inay kooxdaa ka tirsan yihiin.
BBC Eye ayaa sidoo kale iyada oo adeegsanaysa xagasha hooska nimanka kexeeynaya dadkan waxay xisaabtay dhanka uu ka imanayo iftiinta qorraxda, taasoo soo saartay in uu dilkani dhacay intii u dhaxaysey 20-kii Maarso iyo 5-tii Abriil ee 2015-kii.
Wasiirka Warfaafinta Cameroon, Issa Tchiroma Bakary, ayaa 11-kii Luulyo ee 2018-kii ku dooday in hubka ay siteen raggii haweenkan iyo carruurtan laynayey aysanba adeegsan ciidanka dalkiisu, yeelkeede, BBC ayaa xaqiijisay in hubka dadkan lagu laayey uu midkood ahaa Zastava M21 oo lagu sameeyey dalka Serbia islamarkaana ay leeyihiin qaybo ka mid ah Ciidanka Cameroon.
Wuxuu kale oo ku dooday Bakary in tuute-duureedka ay sitaan askarta dadka tooganaysaa aanu ahayn mid ay leeyihiin ciidamadiisu, isagoo taa biddaalkeeda ku dooday inay qaataan tuute-abaareedka saxaraha, balse muuqaal uu 2015 duubay Channel 4 waxaa ka muuqda Ciidamada Cameroon oo xiran dharkan tuute duureedka ah.
Ragga dilka arxan darrada ah ee bilaa qalbiga ah gaystey ee 3-da ah oo ka mid ah 7 qofood oo haatan shilkan u xiran ayaa kala ah Cyrique Bityala ”Tchotcho” oo ah ninka qaabka qoor-qabadka ah u wada haweenayda wadata gabadha yar ee socota taasoo uu indhaha ka xirayo kahor intaanu khaarajin, labada kale waa Barnabas Donossou oo ah ninka indhaha ka xiraya haweenayda ilmaha yar xambaarsan kahor intaan labadaba la toogan.
Ninka 3-aad ee garwaaxsan qoriga Zastava M21 waxaa lagu naanaysaa ”Second Class Copra”, waana ninka xitaa rasaasta ka dayn waayey markii ay dhinteenna mayd garaacay 2-da haweenka ah iyo ilmohooda saqiirka ah, ilaa 2 jeer ay askartii kale ku yiraahdaan ”war ka daa ku filane… War ka daa dhinte e!”. Ninkaasi waa Tsanga ”Copra”.
Nin kale oo eedaysanayaasha waawayn ka tirsan balse aan muuqaalka laga arkaynin waa Ettienne Fabassou oo taliye u ahaa ciidamadan, iyadoo Wasiir Bakary oo horay u inkirayey in ciidamadani ay xitaa dalkiisa u dhasheen ayaa haatan qirtay in 7 askari dabka laga dhigay oo xabsi lagu tuuray baarisina ku socoto.
Previous articleWasaaradda Warfaafinta oo u baahan inay wax ka bedesho arrin uu caadaystey Raadiyo Muqdisho (Dhegeyso)
Next articleSirdoonka Galbeedka oo taariikh cusub u qabtay ”duullaanka Ruushka” ee Ukraine & meel aan Ruushka lagu gaarin (Maxay samayn karaan Galbeedku haddii uu weerar dhaco?)